सिड्नीको हर्स्ट्भिलमा एक नेपालीको दुखद निधन - Nepali Times Australia :: The First Nepali Magazine Published in Australia
सिड्नीको हर्स्ट्भिलमा एक नेपालीको दुखद निधन
-- The NTA / प्रकाशित मिति : शुक्रबार, बैशाख १०, २०७३
श्रीमती एक छोरा र एक छोरिका साथमा सिड्नीको हर्स्टभिलमा बसोबास गर्दै आउनु भएका सुरज भट्टराईको ४५ बर्ष कै अल्पआयुमा २१ अप्रिलका दिन ब्याम गर्दा गर्दै ब्यामशालामा दुखद निधन भएको छ । सधै झैँ आफ्नो अपार्टमेन्टमा रहेको ब्यामशालामा ब्यामगर्ने क्रममा यो घटना घटेको पारिबारिक श्रोतले जनाएको छ । घटना घट्दा स्व. भट्टराईकको सानो छोरा मात्र साथमा भएकोले घटना के कसरी घटन पुग्यो यकिन नभई सकेको घटनामा सग्लंन प्रहरीले बताएको छ । त्यसको आलाबा ब्यामशालामा जडित स्वचालित क्यामारा समेत उक्त बखत बिग्रेकोले प्रहरीले फुटेज समेत हेर्न नसकेको बताईएको छ । बुवा अचेत भएर लडे पश्चात नाबालक छोरले सहयोगको लागि गुहार गरे पनि ढोका खोलि बाहिर जान असमर्थ भएको घटना लगतै पुगेका आफन्तजनको अनुमान छ । संगै रहेको स्विमिङ्ग पुलमा आउदै गरेकी एक महिलाले भट्टराईको अबस्था देखे पश्चात तत्कालै एम्बुलेन्स / बिल्डिंग म्यानेजरलाई सम्पर्क गरेकी थिइन् । केहि समय मै आइ पुगेको परामेडिक्स टिमले स्वास प्रस्वासका सबै प्रयास असफल भए पछाडी भट्टराईलाई घटना स्थल मै मृत घोषित गरेको थियो ।
अति मिलनसार, मेहनती, हँसिला र फरालिसा स्वभाबका भट्टराई नेपाली समुदायमा निकै प्रिय पात्र थिए । नेपाली सामुदायिक गतिबिधिमा सधै सकृय र कृयाशील स्व. भट्टराईको दुखद निधनले नेपाली सुमदायले एक होनाहार सदस्य गुमाएको छ ।
पारिबारिक श्रोतको अनुसार भट्टराईको मृत शरीर हाल पोस्टमार्टमको लागि ग्लिबमा रखिएको छ । डाक्टरहरुको अनुसन्धान पश्चात मात्र उनको मृत्युको कारण खुल्न सक्ने छन् । परारम्भिक अनुमान अनुसार हार्ट-एट्राक भएको हुन सक्ने शंका गरिएको भए पनि पारिबारिक श्रोतले उनमा पहिले कुनै त्यस्तो मुटु सम्बन्धि समस्या नभएको बताएको छ ।
अल्प आयु मै मृत्यु बरण गर्नु भएका स्व. सुरज भट्टराई प्रति द नेपाली टाईम्स अस्ट्रेलिया परिवार हार्दिक श्रदान्जली अर्पण गर्दै शोक संतप्त परिबारमा धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति प्राप्त होस् भनि भगवान सँग प्रार्थना गर्दछ ।